प्रायः फिल्महरू किन शुक्रवार रिलिज हुन्छन् ?
कात्तिक ३, २०७४
काठमाडौं, ३ कात्तिक — कुनै पनि नयाँ फिल्म प्रायः जसो शुक्रवारकै दिन रिलिज हुन्छन् । किन यसो गरिन्छ त ?
खासमा हलिउडका फिल्महरू शुक्रवार रिलिज हुने चलन चलेपछि अन्य देशले पनि त्यसको सिको गरेका हुन् । त्यसो त हलिउडकै फिल्म पनि पहिलापहिला अन्य दिन समेत रिलिज हुन्थे ।
तर सन् १९३९ मा आएको फिल्म गन विथ द विन्ड शुक्रवारको दिन रिलिज भएपछि सुपरडुपर हिट भएको थियो । त्यसपछि चाहिँ शुक्रवार नै फिल्म रिलिज गर्ने परम्परा बस्यो ।
भारतको पहिलो चलचित्र राजा हरिश्चन्द्र सन् १९१३ मा रिलिज भएको थियो । त्यो अर्कै कुनै वारमा रिलिज भएको थियो । त्यतिखेर प्रायः फिल्महरू सोमवार रिलिज हुन्थे । तर सन् १९६० मा आएको फिल्म मुगल–ए–आजम शुक्रवार रिलिज भएर सुपरडुपर हिट भएपछि भने शुक्रवार रिलिज गर्ने एकखालको चलन बस्यो ।
खासमा शुक्रवारपछिका दुई दिन छुट्टी हुन्छन् । शनिवार र आइतवारलाई सप्ताहान्त मानिन्छ र फुर्सदमा भएका मानिसहरू सिनेमाहलमा पुग्छन् भन्ने अपेक्षासहित शुक्रवार फिल्म रिलिज गरिन्छन् । हलमा दर्शक झुम्मिए भने फिल्मले पैसा कमाउने हो ।
पहिलापहिला सोमवार फिल्म रिलिज हुँदा चाहिँ यो फाइदा उठाउन गाह्रो पर्थ्यो ।
तर विशेष अवसरहरूमा चाहिँ फिल्महरू शुक्रवारबाहेक अन्य दिनमा पनि रिलिज हुन्छन् । शुक्रवार नै फिल्म सार्वजनिक गर्नुपर्छ भन्ने कुनै नियम छैन । पर्वहरूमा अर्कै दिन पनि फिल्म रिलिज हुन्छ । जस्तो, छक्का पञ्जा २ दशैंको छेको पारेर बुधवार रिलिज भएको थियो अनि बिहीवार लक्ष्मीपूजाको दिन पारेर रुद्रप्रिया रिलिज भएको थियो ।
जे होस्, बिदाको अवसर पारेर निर्माताहरूले फिल्म रिलिज गर्छन् । यसो गर्दा फाइदा लिन सकिन्छ भन्ने उनीहरूको सोच हो । तर फिल्म झुर छ भने जुन दिन रिलिज भएपनि फ्लप नै हुन्छ ।
कात्तिक ३, २०७४ मा प्रकाशित